Wq/ig/Hafsat Abiola - Wikimedia Incubator
< Wq‎ | igWq > ig > Hafsat Abiola
Peace sitere n’inwe ike inye ihe kacha mma anyị nwere, na ihe niile anyị bụ, n’ịmepụta ụwa nke na-akwado onye ọ bụla. Mana ọ na-echekwa ohere maka ndị ọzọ inye ihe kacha mma ha nwere na ihe niile ha nwere.
Hafsat Abiola (amụrụ 21 Ọgọst 1974, na Lagos) bụ onye Naijiria ikike mmadụ, ikike obodo na onye na-akwado ọchịchị onye kwuo uche ya, onye guzobere Kudirat Initiative for Democracy (KIND), nke na-achọ ịkwalite ọha obodo na ịkwalite ọchịchị onye kwuo uche na Nigeria. Ọ bukwa onye na-eme ihe nkiri.
Okwu ndị ọ kwuruEdit
File:Hafsat Abiola, William Dafoe & Bianca Jagger na Berlin Sept 2006.jpg
Hafsat Abiola', Willem Dafoe na Bianca Jagger na Iwetu Ihe Ọmụma Tebụl nke olu efu na Berlin, Septemba 2006
Ndị na-ese ụkpụrụ udo (2000) Essay na Markkula Center for Applied Ethics, nakwa na Architects of Peace : Visions of Hope in Okwu na onyonyo (2000), nke Michael Collopy deziri
N’ọtụtụ ebe ndị Nigeria chịrị tupu ha achị, nakwa n’Africa n’ezie, mba agbụrụ haziri ndị mmadụ n’ime obodo ka ha bụrụ ndị ọgbọ ma zụọ ha, malite n’oge ha bụ nwa ọhụrụ ruo n’oge ochie, ka ha na-ejere obodo ha ozi. Mgbe ihe ịga nke ọma, usoro a na-enye ndị niile nọ n'otu obodo ọ bụghị nanị na ha nwere mmetụta nke ịbụ onye kamakwa ụgbọ maka inye aka n'ịkpụzi ntụzịaka obodo na ọsọ ọsọ mgbanwe. Na usoro a, ndị mmadụ maara na ha tozuru oke inye aka dozie okwu ọ bụla metụtara obodo.
Echiche nke ikike a na-esi n'usoro emume na-amalite ụbọchị a mụrụ nwa. Mgbe a mụrụ nwa, mgbe sekọnd ole na ole mbụ gasịrị, ọ na-ahapụ mkpu ákwá, bụ́ nke na-ekwupụta ọbịbịa ya, nke na-egosipụtakwa ọṅụ. N'etiti ndị Yoruba, a na-anabata mbata ahụ site na mmemme ịkpọ aha ebe ndị nne na nna na-enye aha na-egosipụta nnukwu ihe pụtara na olileanya maka nwa ọhụrụ. Mgbe m rutere, nne na nna m kpọrọ m Hafsat Olaronke, nke pụtara na a na-elekọta onye dị oké ọnụ ahịa na nsọpụrụ. Nye ndị mụrụ m, ha hụrụ n’ime m onye a ga-eji kpọrọ ihe na onye ga-ewetara obodo ya nsọpụrụ. Ọtụtụ ndị nọ n’akụkụ ụwa ndị ọzọ na-enwe mmasị mgbe ha chọpụtara ihe aha m pụtara, ma nke bụ́ eziokwu bụ na ọtụtụ aha ndị Africa nwere ihe mara mma ọ pụtara.
N'adịghị ka obere obodo, ebe onye ọ bụla bi n'echiche efu nke inwe otu echiche, nkwenye, na ụkpụrụ dị ka onye ọ bụla ọzọ, na nnukwu ọnọdụ nke ọtụtụ obodo - ma ọ bụrụ na mba, kọntinent, ma ọ bụ n'ụwa - anyị bi. na echiche efu nke ọdịiche zuru oke. Ya mere, na-atụ egwu na mmekọrịta ahụ ga-agbanwe anyị, anyị na-ebuli egwu dị na itinye aka na nke dị iche na anyị. Mgbanwe na-akpata nrụgide, yana ọnụ ahịa, n'ihi na ọ na-achọ ịmụta ịnyagharịa nke a na-amaghị. N'ikpeazụ, ị pụghị ịrụ ọrụ na onye ọ bụla dị iche, nsogbu ndị a pụrụ idozi ma ọ bụrụ na anyị ekwe ka onye ọ bụla na-enye ihe kasị mma n'onwe ya na-amalite ile anya na-agaghị ekwe omume.
Udo na-abịa site n'inwe ike inye ihe kacha mma anyị nwere, na ihe niile anyị bụ, n'ịmepụta ụwa nke na-akwado onye ọ bụla.
na ihe niile ha bụ.
Edemede Hafsat Abiola na Wikipedia Bekee
Edemede Hafsat Abiola na Wikiquote Bekee
UU Ụlọ mgbakọ na mwepụ
World Future Council Ashoka Fellow (2003)
Naijirịa's Orphan (profile) na akwụkwọ akụkọ TIME (22 June 1998)
Retrieved from "https://incubator.wikimedia.org/w/index.php?title=Wq/ig/Hafsat_Abiola&oldid=5449010"